Gootota Oromoo fi Ebla 15 ilaalchisee Ibsa ABO | QEERROO
Gootota Oromoo fi Ebla 15 ilaalchisee Ibsa ABO
Posted on April 15, 2018 by Qeerroo
Gootota Oromoo fi Ebla 15
(Ibsa ABO Guyyaa Gootota Oromoo Ilaalchisuun)
Ebli 15 akka Guyyaa Gootota Oromoo tahu kan filatameef sababa quubsaa fi seena-qabeessa qaba. Ebla 15, bara 1980tti Goototni ilmaan Oromoo kanneen Adda Bilisummaa Oromoo bu’uuressuu fi hoogganuu, akkasumas, Dirree Qabsoo Hidhannoo saaquu fi Waraana Bilisummaa Oromoo gadi dhaabuu keessatti qooda ol’aanaa qabaachaa turan (Hayyu-Duree fi Itti Aanaa isaa dabalatee) fi qondaalotni waraanaa fi dabballootni gameeyyiin kan keessatti argaman namootni 10 dirqama qabsoo ol’aanaadhaaf osoo amna irra jiranii bakka fi yeroo tokkichatti wal-faana wareegamanii boolla tokkotti awwaalaman. Kunis kan
tahe, Gootowwan sun balaa ulfaataa fi suukanneessaan kan Tokkummaa Saba Oromoo qormaata hamaa keessa galchuu danda’u oggaa isaan mudatetti Tokkummaa Oromummaa filachuudhaan addaan bahuu didanii waliin wal irratti dhumuu filachuu isaaniitiini. Akkanaanis naannoo dhalootaa, Gosaa fi Amantii caalaa kan walitti nu qabu Tokkummaa Oromummaa keenya tahuu dhaloota hegereef barnoota bara baraa kennanii Siidaa Tokkummaa keenyaa dhiigaa fi lafee isaaniitiin gadi dhaabanii ofii dabran. Kunis kan tahe lafa har’a Bulchiinsa Naannoo Somaalee jedhamu keessatti kan argamtu iddoo Shinniiga jedhamtutti.
Ummatni Oromoo waliigalatti fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo addatti namootaa fi
murnoota qaama Qabsoo fi qaama Qeerroo Bilisummaa Oromoo fakkaatanii Qeerroo dhabamsiisuuf hojjetan itti dammaquudhaan qulqullina fi ititia Mooraa Qabsoo Bilisummaa cimsuun haalaan barbaachisaa dha.
Injifannoo Ummata Oromoof ! Adda Bilisummaa Oromoo Ebla 13, 2018